समाचार – Page3– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१७ चैत्र २०७६, सोमबार २१:४८ English
कोरोना सम्बन्धि औषधी नेपाल पठाउन भारत सहमत २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०८:३८
युएईमा रहेका २ नेपालीमा भेटियो कोरोनाको संक्रमण २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १९:१६
काठमाडौँ, २६ फाल्गुण । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका २ नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २ नेपालीसहित १४ जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन् । योसँगै युएईमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५९ पुगेको छ । नयाँ संक्रमित १४ जनामा ४ जना..
होलीको दिन ७ सय बढी सवारी चालक कारबाहीमा
काठमाडौँ, २६ फाल्गुण । आज होलीको दिन ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने ७ सयभन्दा बढी चालक कारबाहीमा परेका छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार ७६ मोटरसाइकल र ७११ जना सवारी चालकलाई कारवाही गरिएको छ । मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, तीन जना बोक्ने मोटरसाइकल र आवश्यक कागजात साथमा नबोकेका चालकलाई..
नेपालीलाई भारत नजान आग्रह
रासस, कैलाली, २६ फाल्गुण । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट बच्न अत्यावश्यक काम परेमात्रै भारत जान नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । यो समय नेपाली नागरिक बढी मात्रामा घर फर्कने समय हो । हाल भारतबाट दैनिक सयौँ नेपाली होली पर्व, चैते दशैँ तथा नयाँ वर्ष..
पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्यारा पक्राउ २५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०९:५३
बारा, २५ फाल्गुण । पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्यारा पक्राउ परेका छन् । कुन्दन भन्ने नरेन्द्र चौधरीलाई आइतबार बिहानै प्रहरीले उनको आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेको छ । तत्कालीन माओवादीमा संलग्न उनलाई निवासबाटै बिहान २ बजे पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ गर्दा अवरोध सिर्जना भएपछि ४ राउन्ड हवाई..
गुडिरहेको माइक्रोबस घरभित्रै छिरेपछि……… २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १२:५२
चितवन, २४ फाल्गुण । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–३, फिस्लिङ्ग बजारमा सडकमा गुडिरहेको माइक्रो बस अनियन्त्रित भएर घरभित्रै छिरेको छ । चितवनबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा ३ ख २५७३ नम्बरको माइक्रो बस बिहान अनियन्त्रित भएर घरभित्रै छिरेको थियो । माइक्रोको ठक्करबाट दुई जना स्थानीय..
सयको सामान ३ सयमा बेच्ने पक्राउ
काठमाडौँ, २४ फाल्गुण । कोरोना भाइरसका कारण बजारमा सर्जिकल सामानको कालोबजारी बढेको छ । नेपाल प्रहरीले सर्जिकल सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवा न्यूरोडबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विश्वमा फैलँदै गएको कोरोना भाइरसको मौका छोपेर ह्याण्ड..
मौसम बदली आइतबारसम्मै
काठमाडौँ, २४ फाल्गुण । शुक्रबारबाट सुरु भएको मौसम बदली आइतबारसम्म जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको छ । पश्चिमी वायु, स्थानाीय वायु र बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्फयुक्त हावाका कारण नेपालको मौसममा बदली भईरहेको विभागले जनाएको छ । वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ र असिना..
विद्यार्थीको हात चिर्न लगाउने शिक्षिकालाई विद्यालयले हटायो
काठमाडौँ, २४ फाल्गुण । परीक्षामा कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीको हात चिर्न लगाउने शिक्षिकालाई काठमाडौँको एक विद्यालयले जागिरबाट निकालेको छ । काठमाडौंको जडिबुटीस्थित जागृति एकेडेमीमा पढाउने शिक्षिका सीतालक्ष्मी कर्माचार्यले कम नम्बर ल्याउने कक्षा ६ र ७ का गरी ३४ जना..
प्रधानमन्त्रीलाई खाना खुवाउन थालियो २३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १६:५१
काठमाडौँ, २३ फाल्गुण । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्काका अनुसार उनी हिडडुल गर्न सक्ने भएका छन् । शुक्रबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर डा. खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आजदेखि ठोस आहार..
कोरोनाबाट बच्न ‘हात मिलाउने होईन, नमस्कार गरौँ’ २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:३०
रासस, २२ फाल्गुण । ‘‘कोरोना संक्रमणसँग टाडा रहन मिलाउने हैन, शिष्टतापूर्वक नमस्कार गरौँ ।” महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले यो सन्देश फैलाउन अहिले अभियान नै शुरु गरेको छ । बर्दिवास नगरक्षेत्रका सघन आवजावत हुने र मानिस जम्मा हुने चोकमा नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्की आफैँ यो अभियानमा..
कोरोनाको आशंकामा अस्पताल भर्ना भएका व्यक्ति भागेपछि….
काठमाडौँ, २२ फाल्गुण । कोराना भाइरसको आशंकामा अस्पताल भर्ना भएको व्यक्ति भागेका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएका एक युवा अस्पतालको झ्यालबाट भागेका हुन् । कोरियाबाट फर्केका उनी सुनसरीका हुन् । उनी बुधबार राति झ्यालबाट हाम फालेर..
सुर्खेतमा जिप दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १५:१८
सुर्खेत, २१ फाल्गुण । सुर्खेतको गल्छेनामा बुधबार जिप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य चार जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिका–३ की ४२ वर्षीय खड्गबहादुर बीसी, उनकी ३९ वर्षीया श्रीमती गोमा बीसी र सुर्खेत घर भएका ५० वर्षीय देबबहादुर..
गोरखामा बन्दै गरेको पुल ढल्दा ३ कामदार घाइते
गोरखा, २१ फाल्गुण । गोरखामा बन्दै गरेको पुल ढल्दा तीन जना कामदार घाइते भएका छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पालुङटार र तनहुँको तुरतुरे जोड्ने मर्स्याङ्दी नदीमाथि निर्माण भइरहेको पुल मंगलबार राति ढलेको हो । पुल ढल्दा ढलान गर्न छड कसिरहेका तीन कामदार घाइते छन् । दुई जनाको स्थानीय..
रामेछापबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस काभ्रेमा दुर्घटना, २५ जना घाइते
काभ्रे, २१ फाल्गुण । काभ्रेको चौरी देउरालीमा यात्रु बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते भएका छन् । रामेछापको गुराँसेबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा ४ ख ७१०२ नम्बरको बस काभ्रेको चौरी देउरालीमा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी घाइते भएकामध्ये गम्भीर घाइते ६ जनालाई चौरी देउराली गाउँपालिकाको..
४ करोड २७ लाख पर्ने अवैध सुनसहित भारतीय नागरिक पक्राउ २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार १७:५७
मकवानपुर, २० फाल्गुण । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको प्हरी टोलीले ६ किलो अवैध सुनसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । भारत कर्नाटकका ४२ वर्षीया अब्दुल मजिज अनेकललाई प्रहरीले मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको हो । हेटौंडा १५ स्थित रातोमाटेमा काठमाडौंबाट विरगंज हिडेको..